MR MRT: ၂-၁-၂၀၁၆
"ဟလို . . . . . . ."
"ဘုန်းဘုန်း . . . တပည့်တော် . . ."
"ခုချိန်ထိ အေးဆေးပဲ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒီချုပ် လွှမ်းနေပြီ။ ဦးဝင်းမြင့်တို့ နှစ်ယောက် ကတိသစ္စာ ပြုပြီးသွားပြီ။ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောနေပြီ။ ရွာမှာလည်း တပည့်တော်တို့ လွှမ်းရမှာပဲ။ ဟိုကောင်တွေ နာဖို့သာ ပြင်ပေတော့။"
"ဟေ့ကောင့်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ . . . အဲ့ဒီလို စိတ်ဓာတ် အစုတ်အပြတ် . . . ကလေးစိတ်၊ ခွေးစိတ်၊ သူခိုးကြမ်းပိုးစိတ်တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်ကွ။နားလည်ရဲ့လား။"
Posted by Ashin Acara. at 12:03 AM